wailinnn ပါ — MYSTERY ZILLION
MZ ကိုရောက်တာကြာပါပြီ.. စာတွေလိုက်ဖတ်နေတာနဲ့.. နှုတ်မဆတ်ဖြစ်ပါဘူး.. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.. ကျမကကွန်ပျုတာကျောင်းဆင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး... IT အကြောင်းကို သိချင်လို့ လိုက်လေ့လာနေသူတစ်ဦးပါ.. ကိုစေတန်ရဲ့ စကားအတိုင်း အရင်ဆုံးစာတွေထဲမှာလိုက်ရှာဖတ်နေပါတယ်...အဟဲ.. ရှာဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့.. ခေါင်းတွေလဲမူးနေပြီ :O:O... ကိုယ်သိချင်တာတစ်ခုကို လိုက်ရှာဖတ်ရင်းနဲ့.. ဆင့်ပွါးတစ်ခြားအကြောင်းအရာလေးတွေလဲသိရလို့.. တကယ်ကို အကျိုးမယုတ်ပါဘူး :)... ကျေးဇူးပဲ MZ က၀ိုင်းတော်သားများရေ............ကိုစေတန်ရဲ့ Blog ထဲကိုလည်း၀င်မွှေထားတာ တော်တော်ပွနေပြီ..ဟဲ ဟဲ. :)
wailinnn wrote: »
Keep on trying my friend. But don't forget to share what you have learned.
ကြိုဆိုပါတယ် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာ....... ကျနော့်နာမည်လည်း မှတ်ထားဦးနော်...... မောင်ပြုံးတဲ့...........
ကျွန်တော်မောင် Orbs.7 မှလည်း နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ညာ.....:6:
mz ကိုရောက်တာကြာပါပြီ.. စာတွေလိုက်ဖတ်နေတာနဲ့.. နှုတ်မဆတ်ဖြစ်ပါဘူး.. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.. ကျမကကွန်ပျုတာကျောင်းဆင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး... It အကြောင်းကို သိချင်လို့ လိုက်လေ့လာနေသူတစ်ဦးပါ.. ကိုစေတန်ရဲ့ စကားအတိုင်း အရင်ဆုံးစာတွေထဲမှာလိုက်ရှာဖတ်နေပါတယ်...အဟဲ.. ရှာဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့.. ခေါင်းတွေလဲမူးနေပြီ :o... ကိုယ်သိချင်တာတစ်ခုကို လိုက်ရှာဖတ်ရင်းနဲ့.. ဆင့်ပွါးတစ်ခြားအကြောင်းအရာလေးတွေလဲသိရလို့.. တကယ်ကို အကျိုးမယုတ်ပါဘူး :)... ကျေးဇူးပဲ mz က၀ိုင်းတော်သားများရေ............ကိုစေတန်ရဲ့ blog ထဲကိုလည်း၀င်မွှေထားတာ တော်တော်ပွနေပြီ..ဟဲ ဟဲ. :)
ကြိုဆိုပါတယ် ဗျာ ။ သိတာလေးတွေ့ရှိရင် လည်းေ၀မျှပေးပါ။ ကျွန်တော် ကတော် သိချင်တာရှိရင် mz မှာပဲ မွှေရှာတော့တာပဲ။
The more you know, you don't know.
It is justasaying. Check out MZ and Learn more and Share your experiences.
mz ကိုရောက်တာကြာပါပြီ.. စာတွေလိုက်ဖတ်နေတာနဲ့.. နှုတ်မဆတ်ဖြစ်ပါဘူး.. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ.. ကျမကကွန်ပျုတာကျောင်းဆင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး... It အကြောင်းကို သိချင်လို့ လိုက်လေ့လာနေသူတစ်ဦးပါ.. ကိုစေတန်ရဲ့ စကားအတိုင်း အရင်ဆုံးစာတွေထဲမှာလိုက်ရှာဖတ်နေပါတယ်...အဟဲ.. ရှာဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့.. ခေါင်းတွေလဲမူးနေပြီ :13::13:... ကိုယ်သိချင်တာတစ်ခုကို လိုက်ရှာဖတ်ရင်းနဲ့.. ဆင့်ပွါးတစ်ခြားအကြောင်းအရာလေးတွေလဲသိရလို့.. တကယ်ကို အကျိုးမယုတ်ပါဘူး :1::1:... ကျေးဇူးပဲ mz က၀ိုင်းတော်သားများရေ............ကိုစေတန်ရဲ့ blog ထဲကိုလည်း၀င်မွှေထားတာ တော်တော်ပွနေပြီ..ဟဲ ဟဲ.
အင်း ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ...ကျွန်တော်လည်းအခုမှတွေ့လို့ ကြိုမိတာ။
Warmly welcome to MZ
Haveagreat time with MZ
:dကျွန်တော် piglay ကလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်....:103:
p k linn
ကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း ဒီ WEB ကို၀င်တာမကြာသေးပါဘူး။အောင်မြင်ပါစေ။